IGAD oo ka hadashay Khilaaf la sheegay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha uu kala Dhexeeo
Wakiilka Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan Magaalada Muqdisho, Jamaal Xaaji Aadan ayaa waxuu beeniyay wararka ku aadan in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay mas’uuliyiinta Ururka Goboleedka IGAD iyo Wasaarada Arimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku howlan dhismaha Maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe.
Wakiil IGAD Jamaal Xaaji Aadan ayaa waxuu tilmaamay in wararkaasi been abuurka ah ay wadaan Dad uu ku tilmaamay in ay caqabad ku yihiin geedi socodka Shirka Maamul u sameynta labada Gobol.
Wakiilka ayaa sidoo kale waxuu xusay in qeybta 1-aad ee Shirka Maamul u sameynta ay ku guuleysteen, islamarkaana haatan ay gudaha galeen qeybtii 2-aad ee Shirka, waxuuna sidoo kale intaasi ku daray in ergada ay diyaarsan yihiin.
Dhinaca kale, Wakiilka Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan Magaalada Muqdisho, Jamaal Xaaji Aadan ayaa rajo wanaagsan waxuu ka muujiyay in Ugaasyada Gobolka Hiiraan ay ku soo biiraan Shirika Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh.Dhexe.
Waxuu tilmaamay in mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ay haatan ku sugan yihiin Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ku qancinaya Odayaasha Gobolka Hiiran in ay qeyb ka noqdaan dhismaha Maamulka labada Gobol.
Hadalka Wakiil Jamaal Xaaji Aadan ayaa waxuu imaanayaa xili maalmihii dambe ay soo baxayeen warar sheegayay in khilaaf uu soo kala dhex galay mas’uuliyiinta Urur Goboleedka IGAD iyo kuwa Wasaarada Arimaha Gudaha eek u howlan shirka Maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe.